တကယျလို့မြား ငါ မနကျဖွနျဆိုတာ မရှိတော့ရငျ … တှေးကွညျ့ဖူးလား…? – Nyi Ma Lay
တကယျလို့မြား ငါ မနကျဖွနျဆိုတာ မရှိတော့ရငျ … တှေးကွညျ့ဖူးလား…?
ကနြျောတို့တှေ ဘယျတုနျး ကမှ မတှေးခဲ့ဖူး တဲ့အေ တှးလေးတဈခု စိတျကူးတောငျမယဉျကွညျ့မိတဲ့ အရာတဈခု….ရှိတယျ။
(တကယျလို့မြား ငါ မနကျဖွနျဆိုတာမရှိတော့ရငျ… ဆိုတာမြိုး ) တှေးကွညျ့ဖူးလာ…?
မနကျဖွနျမှာ တကယျလို့…..ခငျဗြားသာ မရှိတော့ရငျ မိသားစုတှေ အပေါငျးသငျး သူငယျခငျြး တှအေားလုံး ပွာပွာသလဲ ဖွဈသှားကွမယျ ငိုတဲ့သူက ငိုကွမယျ… ခဈြသူခငျသူ အားလုံး ဝမျးနညျးကွမယျ….
ခကျြခငျြးကွီးဆိုသလို ခငျဗြား Fb acc လေးမှာ RIP ဆိုပွီး စိတျမကောငျးတဲ့ Status တှေ… tag post တှတေနျးစီကုနျမယျ….ခငျဗြားအကွောငျးတှပွေောကွမယျ…. မနာလိုသူတှကေလဲ အနညျးဆုံး တော့အရငျလို မကောငျးပွောမှာတော့ မဟုတျဘူး….။
ခငျဗြားရဲ့ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ အကငျြ့တှပွေနျပွောကွမယျ ရှိနတေုနျးကဘယျတော့မှ မကွားရတဲ့ တနျဖိုးထားခွငျးတှေ ခြီးမှမျးခွငျးတှေ နဲ့ပွောနကွေမယျ… ဒါဟာ အကွာကွီးမဟုတျပါဘူး…. ရထေဲကို ပဈခလြိုကျတဲ့ကြောကျခဲလေး တဈခုလိုပါဘဲ လှိုငျးတှနျ့လေးခဏထပွီး ငွိမျသကျသှားမှာ….ဘယျတော့မှ ပွနျပျေါမလာခွငျးနဲ့ပေါ့….
ခငျဗြားနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမှတျတရတှကေလဲ အ့လိုဘဲ…ခဏလေးအတှငျးမှာ အမှတျတမဲ့ ကှယျပြောကျသှားကွမှာ…. တကယျကွီးစဉျးစားကွညျပါ မနကျဖွနျမှာ ကိုယျသာ တကယျမရှိတော့ရငျ….ဆိုတဲ့အတှေးကွီးက သှေးလနျ့စရာကောငျးလှနျးပါတယျ….
ဘယျအရာကိုမှပွနျမရတော့လောကျအောငျ ပွီးဆုံးသှားမှာ… ခဈြခွငျး မုနျးခွငျး နာကငျြခွငျးတှအေားလုံး ပြောကျကှယျသှားမှာ…. အမွဲကွားနရေလို့ ငွီးငှနေ့တေဲ့ အမဓေ့ာတျပွားေ ဟာငျးတှလေဲ ကွားရတော့မှာမဟုတျဘူး…
မိသားစု ထမငျးဝိုငျးလေး ဆိုတာလဲ ရှိလာတော့မှာမဟုတျဘူး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ကြောငျးတကျခဲ့ကွတဲ့ အခြိနျတှေ… လဲ မရှိတော့ဘူး လူတှကေိုမမွငျနိုငျလောကျအောငျ ပေါခဲ့ကွတဲ့ အခိုကျတနျ့တှလေဲ့ ပွနျရတော့မှာမဟုတျဘူး….
ဓာတျမတညျ့တဲ့ ဘေးအိမျကလူတှနေဲ့လဲ တှရေ့တော့မှာမဟုတျသလို…. အဝေးက မိတျဆှတှေေ နဲ့လဲ ထပျဆုံနိုငျတော့မှာမဟုတျဘူး… အပွငျက သူငယျခငျြးတှရေော Online သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပါ…. ဘယျတော့မှ ထပျပွီးတှနေို့ငျမှာမဟုတျတော့ဘူး….
ခငျဗြားရှာခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံတှေ…ဝယျစုထားတဲ့ တနျဖိုးကွီးပစ်စညျတှေ ခဈြတဲ့ခငျတဲ့သူအားလုံးကို ခငျဗြားထားခဲ့ရတော့မှာ….မနကျဖွနျသာ တကယျမရှိတော့ရငျ… ဒီနကွေို့း စားထားသမြှတှကေ အလကား ဖွဈကုနျရော
တဈခါတဈလဆေို ကနြျောတို့က မနကျဖွနျဆိုတာကိုတှေးပူပွီး ဒီနလေ့ေးကို သခြောတနျဖိုးမထားလိုကျမိဘူးရယျ….ဘယျလိုကုနျလို့ကုနျသှားမှနျးမသိအောငျကို တနျဖိုးမဲ့ခဲ့ကွဖူးတယျ…. ။
လောဘ ဒေါသတှနေဲ့ ကနြျောတို့ ပတျခြာရိုကျနကွေတယျ…တဈနအေ့ဆငျပွဖေို့ အတှကျတှေးကွရငျး ဒီနမှေ့ော မတရားတာတှလေဲ လုပျမိကောငျးတယျ တဈကိုယျကောငျးလဲဆနျကွဖူးမယျ…
“နရေ့ကျတိုငျးကို နောကျဆုံးနလေို့ သဘောထား ” ဆိုတဲ့စကာက အရမျးလေးနကျတာဘဲ…’ မနကျဖွနျနဲ့ နောကျဘဝ ‘ဆိုတဲ့ အထဲမှာ… နောကျဘဝဆိုတာ နီးနီးလေးပါ မနကျဖွနျဆိုတာ အဝေးကွီးရယျ ….အခြိနျမရှေး ဒီလောကကွီးကို good bye ပွသှားနိုငျတယျ….
ဒီနေ့ active now လေးပွနပေမေဲ့ မနကျဖွနျမှာ remembering acc လေးဖွဈသှားနိုငျတာပါဘဲ အ့တော့ ကနြျောတို့ ဒီနရေဲ့ အခှငျ့အရေးကို အပွညျ့အဝ အသုံးခရြမယျ အမုနျးတ ရားတှကေငျးအောငျနေ မယျ… မနကျဖွနျဆိုတာ ကိုတှေးမပူဘဲ ဒီနမှေ့ာပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖွတျသနျးကွမယျ
တကယျလို့ ကနြေျာ့မှာ မနကျဖွနျဆိုတာမရှိတော့ရငျ….
အမရေဲ့ ဓာတျပွားဟောငျးတှကေိုလဲ တဝကွီးနားထောငျခငျြသေးတယျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့လဲ မမေ့ရမဲ့အမှတျတရတှကေိုလဲ ဖနျတီးခဲ့ခငျြသေးတယျ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြအသိုငျးဝိုငျးက တနျဖိုးထားအားကိုး ရတဲ့လူတြောကျဖွဈခဲ့ခငျြသေးတယျ….
ခဈြတဲ့သူနဲ့ အတူတူပြျောနဖေို့လဲ တဈစိတျတဈပိုငျးပါဝငျခငျြသေးရဲ့…. မှေးဖှားခွငျးနဲ့ သဆေုံးခွငျးဆိုတဲ့ကွား ရှငျသနျခွငျးဆိုတဲ့ အလှာပါးပါးလေးကွားမှာ… ကနြျောတို့က လောဘတှေ ဒေါသတှနေဲ့ ဖွတျသနျးမိနကွေတယျ
မုနျးတဲ့သူတှေ ဓာတျမတညျ့တဲ့နနေံ့တှလေဲ သတျမှတျထားကွသေးတယျ မနကျဖွနျမှာ ကနြျောတိျု့မရှိတော့ရငျ…. ဘာမှလဲ ယူသှားလို့မရဘူး… အမှားတှလေဲပွနျပွငျလို့မရဘူး တောငျးပနျးလို့လဲ မရတော့ဘူး ခှငျ့လှတျစရာလဲ မရှိတော့ဘူး….ခဈြကွောငျးတှလေဲ ပွောခဲ့လို့ရမှာမဟုတျတော့ဘူး
အ့တော့ ဒီနလေ့ေးကို တနျဖိုးထားရအောငျ
ခဈြကွောငျးတှပွေောကွရအောငျ ပတျဝနျးကငျြမှာ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ကောငျးခွငျးတှဘေဲ လကျဆငျ့ကမျးရအောငျ မထားသငျ့တဲ့ အတ်တတှေ မာနတှနေဲ့ ကိုယျ့ကမ်ဘာကိုမကဉျြးမွောငျးပါစနေဲ့တော့… အတ်တတှေ မာနတှကေို မလေို့ကျကွရအောငျ….
ဒီနလေ့ေးကို နောကျဆုံးနလေို့သဘောထားပွီးနေ… ဆိုတဲ့ စကားကို သခြောသဘောပေါကျပွီးတဲ့အခါ…. သခြောပါတယျ ကနြျောတို့ရဲ့နေ့ တှဟော အရငျကထကျ ပို အဓိပ်ပါယျရှိလာမှာ…
ကဲ ခငျဗြားရော…. တကယျလို့မြား မနကျဖွနျဆိုတာ မရှိတော့ရငျ ဒီနနေ့ောကျဆုံး ဘာလုပျခဲ့ခငျြလဲ….. ? Thar Htwe မူရင်းလင့်
ကျ​နော်တို့တွေ ဘယ်တုန်း ကမှ မတွေးခဲ့ဖူး တဲ့အေ တွးလေးတစ်ခု စိတ်ကူးတောင်မယဉ်ကြည့်မိတဲ့ အရာတစ်ခု….ရှိတယ်။
(တကယ်လို့များ ငါ မနက်ဖြန်ဆိုတာမရှိတော့ရင်… ဆိုတာမျိုး ) တွေးကြည့်ဖူးလာ…?
မနက်ဖြန်မှာ တကယ်လို့…..ခင်ဗျားသာ မရှိတော့ရင် မိသားစုတွေ အပေါင်းသင်း သူငယ်ချင်း ​တွေအားလုံး ပြာပြာသလဲ ဖြစ်သွားကြမယ် ငိုတဲ့သူက ငိုကြမယ်… ချစ်သူခင်သူ အားလုံး ဝမ်းနည်းကြမယ်….
ချက်ချင်းကြီးဆိုသလို ခင်ဗျား Fb acc လေးမှာ RIP ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းတဲ့ Status တွေ… tag post တွေတန်းစီကုန်မယ်….ခင်ဗျားအကြောင်းတွေပြောကြမယ်…. မနာလိုသူတွေကလဲ အနည်းဆုံး ​တော့အရင်လို မကောင်းပြောမှာတော့ မဟုတ်ဘူး….။
ခင်ဗျားရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေပြန်ပြောကြမယ် ရှိနေတုန်းကဘယ်တော့မှ မကြားရတဲ့ တန်ဖိုးထားခြင်းတွေ ချီးမွမ်းခြင်းတွေ နဲ့ပြောနေကြမယ်… ဒါဟာ အကြာကြီးမဟုတ်ပါဘူး…. ရေထဲကို ပစ်ချလိုက်တဲ့ကျောက်ခဲလေး တစ်ခုလိုပါဘဲ လှိုင်းတွန့်လေးခဏထပြီး ငြိမ်သက်သွားမှာ….ဘယ်တော့မှ ပြန်ပေါ်မလာခြင်းနဲ့ပေါ့….
ခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေကလဲ အ့လိုဘဲ…ခဏလေးအတွင်းမှာ အမှတ်တမဲ့ ကွယ်ပျောက်သွားကြမှာ…. တကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည်ပါ မနက်ဖြန်မှာ ကိုယ်သာ တကယ်မရှိတော့ရင်….ဆိုတဲ့အတွေးကြီးက သွေးလန့်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်….
ဘယ်အရာကိုမှပြန်မရတော့လောက်အောင် ပြီးဆုံးသွားမှာ… ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း နာကျင်ခြင်းတွေအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားမှာ…. အမြဲကြားနေရလို့ ငြီးငွေ့နေတဲ့ အမေ့ဓာတ်ပြားေ ဟာင်းတွေလဲ ကြားရတော့မှာမဟုတ်ဘူး…
မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေး ဆိုတာလဲ ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ အချိန်တွေ… လဲ မရှိတော့ဘူး လူတွေကိုမမြင်နိုင်လောက်အောင် ပေါခဲ့ကြတဲ့ အခိုက်တန့်တွေ့လဲ ပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး….
ဓာတ်မတည့်တဲ့ ဘေးအိမ်ကလူတွေနဲ့လဲ တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်သလို…. အဝေးက မိတ်ဆွေတွေ နဲ့လဲ ထပ်ဆုံနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး… အပြင်က သူငယ်ချင်း​တွေရော Online သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါ…. ဘယ်တော့မှ ထပ်ပြီးတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး….
ခင်ဗျားရှာခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံတွေ…ဝယ်စုထားတဲ့ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်တွေ ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူအားလုံးကို ခင်ဗျားထားခဲ့ရတော့မှာ….မနက်ဖြန်သာ တကယ်မရှိတော့ရင်… ဒီနေ့ကြိုး စားထားသမျှတွေက အလကား ဖြစ်ကုန်ရော
တစ်ခါတစ်လေဆို ကျနော်တို့က မနက်ဖြန်ဆိုတာကိုတွေးပူပြီး ဒီနေ့လေးကို သေချာတန်ဖိုးမထားလိုက်မိဘူးရယ်….ဘယ်လိုကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းမသိအောင်ကို တန်ဖိုးမဲ့ခဲ့ကြဖူးတယ်…. ။
လောဘ ဒေါသတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ပတ်ချာရိုက်နေကြတယ်…တစ်နေ့အဆင်ပြေဖို့ အတွက်တွေးကြရင်း ဒီနေ့မှော မတရားတာတွေလဲ လုပ်မိကောင်းတယ် တစ်ကိုယ်ကောင်းလဲဆန်ကြဖူးမယ်…
“နေ့ရက်တိုင်းကို နောက်ဆုံးနေ့လို့ သဘောထား ” ဆိုတဲ့စကာက အရမ်းလေးနက်တာဘဲ…’ မနက်ဖြန်နဲ့ နောက်ဘဝ ‘ဆိုတဲ့ အထဲမှာ… နောက်ဘဝဆိုတာ နီးနီးလေးပါ မနက်ဖြန်ဆိုတာ အဝေးကြီးရယ် ….အချိန်မရွေး ဒီလောကကြီးကို good bye ပြသွားနိုင်တယ်….
ဒီနေ့ active now လေးပြနေပေမဲ့ မနက်ဖြန်မှာ remembering acc လေးဖြစ်သွားနိုင်တာပါဘဲ အ့တော့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့ရဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝ အသုံးချရမယ် အမုန်းတ ရားတွေကင်းအောင်နေ မယ်… မနက်ဖြန်ဆိုတာ ကိုတွေးမပူဘဲ ဒီနေ့မှာပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းကြမယ်
တကယ်လို့ ကျ​နော့်မှာ မနက်ဖြန်ဆိုတာမရှိတော့ရင်….
အမေ့ရဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းတွေကိုလဲ တဝကြီးနားထောင်ချင်သေးတယ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲ မေ့မရမဲ့အမှတ်တရတွေကိုလဲ ဖန်တီးခဲ့ချင်သေးတယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းဝိုင်းက တန်ဖိုးထားအားကိုး ရတဲ့လူတျောက်ဖြစ်ခဲ့ချင်သေးတယ်….
ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတူပျော်နေဖို့လဲ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ချင်သေးရဲ့…. မွေးဖွားခြင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ကြား ရှင်သန်ခြင်းဆိုတဲ့ အလွှာပါးပါးလေးကြားမှာ… ကျနော်တို့က လောဘတွေ ဒေါသတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းမိနေကြတယ်
မုန်းတဲ့သူတွေ ဓာတ်မတည့်တဲ့နေ့နံ့တွေလဲ သတ်မှတ်ထားကြသေးတယ် မနက်ဖြန်မှာ ကျနော်တို့်မရှိတော့ရင်…. ဘာမှလဲ ယူသွားလို့မရဘူး… အမှားတွေလဲပြန်ပြင်လို့မရဘူး တောင်းပန်းလို့လဲ မရတော့ဘူး ခွင့်လွတ်စရာလဲ မရှိတော့ဘူး….ချစ်ကြောင်းတွေလဲ ပြောခဲ့လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး
အ့တော့ ဒီနေ့လေးကို တန်ဖိုးထားရအောင်
ချစ်ကြောင်းတွေပြောကြရအောင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကောင်းခြင်းတွေဘဲ လက်ဆင့်ကမ်းရအောင် မထားသင့်တဲ့ အတ္တတွေ မာနတွေနဲ့ ကိုယ့်ကမ္ဘာကိုမကျဉ်းမြောင်းပါစေနဲ့တော့… အတ္တတွေ မာနတွေကို မေ့လိုက်ကြရအောင်….
ဒီနေ့လေးကို နောက်ဆုံးနေ့လို့သဘောထားပြီးနေ… ဆိုတဲ့ စကားကို သေချာသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါ…. သေချာပါတယ် ကျနော်တို့ရဲ့နေ့ တွေဟာ အရင်ကထက် ပို အဓိပ္ပါယ်ရှိလာမှာ…
ကဲ ခင်ဗျားရော…. တကယ်လို့များ မနက်ဖြန်ဆိုတာ မရှိတော့ရင် ဒီနေ့နောက်ဆုံး ဘာလုပ်ခဲ့ချင်လဲ….. ? Thar Htwe
Previous post ရာသီဥတု တိုကျစားမှုကွောငျ့ ကားဘျောဒီ သံခြေးမတတျအောငျ ဘယျလိုကာကှယျမလဲ
Next post ဘယျလို အခွအေနမြေိုးမှာပဲ ဖွဈဖွဈ ခေါငျးဆောငျ အဖွဈ မတငျထိုကျတဲ့ လူ (၆) မြိုး